Iinkonzo -Yancheng Lianggong formwork Co., ltd.
Ikholamu yeplastiki formwork
Plastic ekubhalwe Formwork
Ifomathi yePlastikhi yoDonga
I-H20 Beam formwork
I-H20 yomthi weBall Wall Formwork
H20 Timber Beam ekubhalwe formwork
Umatshini wentsimbi we Precast
Elungiselelweyo Steel Formwork
Isakhelo seFreyim yentsimbi
120 formwork yesakhelo
IFomwork yokunyuka kweCantilever
Ngesanti kubunzulu baphantsi Auto Ukunyuka formwork
Isikrini sokukhusela kunye nePlatform yokuThula
Ubume beBracket esecaleni
Umhambi weFomu yeCantilever
Umbhobho wetroli yombhobho
Ibhodi engenaManzi kunye neTrolley Work Work
Ukufakwa kweArch Car
Emanzi Ukutshiza Machine
Umhambi weCantilever yeFom
ICantilever Yokwenza Umhambi
Ulwakhiwo lweTanki yeLNG kunye naManzi
Indawo yokuhlala kunye neZorhwebo
Ungaqhagamshelana nathi ngolwazi oluthe kratya malunga neLianggong Formwork kwaye ukhethe ukuba yeyiphi inkqubo yeFomwork efanelekileyo ngakumbi kuwe.
Iinjineli zeLianggong zonke zinamava eminyaka, ukuze sikwazi ukuvavanya iimfuno zakho zobugcisa, uhlahlo-lwabiwo mali kunye neshedyuli yesiza zonke zidibene ukuze ziphume nesindululo sobungcali. Kwaye okokugqibela, kuncede ujolise kwinkqubo elungileyo yokucwangciswa kobugcisa.
Amagcisa ethu angayila imizobo ehambelana ne-Auto-CAD, enokunceda abasebenzi kwindawo yakho ukuba bazi iindlela zokusebenzisa kunye nemisebenzi yenkqubo kunye ne-scaffolding system.
I-Lianggong Formwork inokubonelela ngezisombululo ezifanelekileyo kwiiprojekthi ezahlukeneyo ngocwangciso kunye neemfuno ezahlukeneyo.
Siza kulungiselela imizobo yokuqala kunye neekowuteshini kwiintsuku ezimbalwa ezizayo xa sifumene i-imeyile yakho kubandakanya nemizobo yolwakhiwo.
U-Lianggong uzakulungiselela yonke imizobo yokuthenga kunye nomzobo wokudibanisa kubathengi bethu ngaphambi kokuba iimveliso zikaLianggong zifike kule ndawo.
Umthengi unokusebenzisa iimveliso zethu ngokomzobo. Kulula kwaye kusebenza ngokukuko.
Ukuba ungumqali weLianggong formwork kunye ne-scaffolding system okanye ujonge ukusebenza okungcono kwenkqubo yethu, sinokuphinda silungiselele umphathi ukuba abonelele ngoncedo, uqeqesho kunye novavanyo kwindawo leyo.
U-Lianggong uneqela labarhwebi abaqeqeshiweyo lokuhlaziya kunye nokuzalisekisa, ukusuka kwimveliso ukuya ekuhanjisweni. Ngexesha lokuvelisa, siya kwabelana ngeshedyuli yokuqamba kunye nenkqubo ye-QC kunye neefoto kunye neevidiyo ezihambelanayo. Emva kokugqitywa kwemveliso, siya kuthi kwakhona sidubule iphakheji kwaye siyilayishe njengerekhodi, emva koko siyithumele kubathengi bethu ukuba babhekiswe kuyo.
Zonke izinto zikaLianggong zipakishwe ngokufanelekileyo ngokobungakanani kunye nobunzima bazo, ezinokuhlangabezana neemfuno zothutho lolwandle kunye neIncoterms 2010 njengoko kunyanzelekile. Izisombululo ezahlukeneyo zephakeji ziyilelwe ngokufanelekileyo ngezinto ezahlukeneyo kunye neenkqubo.
Ukuhambisa iingcebiso kuya kuthunyelwa kuwe ngeposi ngumthengisi wethu ngazo zonke iinkcukacha eziphambili zokuhambisa. kubandakanya igama lenqanawa, inombolo yesikhongozeli kunye ne-ETA njl. njl. Iseti epheleleyo yamaxwebhu okuhambisa ngenqanawa aya kuthunyelwa kuwe okanye ngefowuni xa usenza isicelo.
Inombolo ye-8 Shanghai Road, iJianhu yoPhuhliso lwezoQoqosho, isiXeko saseYancheng, kwiPhondo laseJiangsu, China
I-LNG kunye netanki lamanzi
Isebe laseSaudi Arabia